သင့်ဘ၀ကို အောက်ဆုံးထိဆွဲချသွားစေနိုင်တဲ့ အရာတွေက – Trend.com.mm
သင့်ဘ၀ကို အောက်ဆုံးထိဆွဲချသွားစေနိုင်တဲ့ အရာတွေက
Posted on December 23, 2018 December 19, 2018 by Shun Lei Phyo
လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်စိတ်ကူး ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုယ်စီနဲ့ ရပ်တည်နေထိုင်ရတာကိုသဘောကျကျတယ်။ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီး တိုင်းလည်း ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်အတိုင်းရဲရဲဝံ၀ံ လျှောက်ချင်တက်ကြတယ်။
ကိုယ်လုပ်မဲ့အရာတစ်ခုကို အချိန်ဆွဲနေတာဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူး လို့ဆိုသလို အလျင်စလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး လုပ်တက်ခြင်းဟာလည်း အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အလျင်စလိုချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ဘယ်တော့မှ အမှန်ကန်ဆုံးမဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ်တကယ် လုပ်ချင်တာဘာလဲ ဖြစ်ချင်တာဘာလဲဆိုတာ သေချာ မသိစေနိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်ချက် မချခင်မှာသေချာစဉ်းစားပြီး မှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ နောင်တကင်းပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဘာလို့ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး ချလည်း ဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်လုပ်ထားပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်သေချာ နားမလည်တဲ့ အလုပ်မျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနေပါ။ ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာတွေအပေါ် မကောင်းမြင်စိတ်များနေရင် ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ကို တစ်ခြားသူယုံကြည် လက်ခံဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပါ ။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အကောင်းမြင်စိတ်ထားပြီးယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။
တစ်ခုခုကို အောင်မြင်မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်ချင်ရင် လောဘမကြီးပါနဲ့ ၊လောဘကြီးလွန်းရင် အလုပ်တွေဟာတစ်ခုမှအရာမရောက်ပဲ အကုန် အလယ်မှာတင် ပြတ်ကျကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လောဘမကြီးပဲ တစ်ဆင့်ချင်းဆောင်ရွက်ပါ။
5. အချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးချပါ
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့အချိန်ကို အကောင်းဆုံးစီမံ အသုံးချတက်ဖို့လို့ပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့အချိန် မှ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိုင်မှာပါ။ အချိန်ခါမသင့်ပဲချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကြာရှည်ခံဖို့မသေချာပါဘူး။
6. ငွေရေးကြေးရေး အရှုပ်အရှင်းရှောင်ပါ
ငွေရေးကြေးရေး အရှုပ်အရှင်းတွေကြောင့် ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေ ရှေ့ဆက်မသွားတာမျိုး၊ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကောင်ထည်မပေါ်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်တက်ပါတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ အနိုင်နဲ့အရှုံးကိုတွေးထားပါ။ ကိုယ်ချထားတဲ့ပထမအစီအစဉ်မအောင် မြင်ရင် နောက်အစီစဉ်တစ်ခုက အဆင်သင့်ရှိနေပါစေ။ ပထမတစ်ခုအဆင်မပြေလို့အားလုံးရပ်တန့်ပျက်စီးသွားရတယ်ဆိုတဲ့လူညံ့အဖြစ်မျိုး အဖြစ်မခံပါနဲ့။
တတိယမြောက် ရင်သွေးလေး မွေးဖွားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Maybee